अवैधानिक सरकारका परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा किन जाँदैछन् ? – eSajha News
प्रकाशित मिति: २८ पुष २०७७, मंगलवार १७:२८
संविधानमा व्यवस्था नै नभएको धाराको अनर्थ व्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघट्न गरी आफू र आफ्नो गूटका व्यक्तिहरु बाहेक अरु सबैलाई सडकमा धकेल्न सफल भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशका विरुद्ध के षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्ने कुरा झन् पछि झन् डरलाग्दो रुपमा प्रकट भइरहेको छ । अधिवेशन सुरु भएको ९ औं दिनमा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । माघ १ गते परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली भारत भ्रमणमा जादैछन् । नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा रहेको वर्तमान समय परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतको निम्तो किन भयो ? यो गम्भीर प्रश्नतर्पm नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण भएको पाइएको छैन । २००७ साल, २०१७ साल, २०४६ साल र २०६२ साल लगायतका घटनाहरुलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट भारतले धेरै फाइदा लिएको छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भनौं — भारत सरकारले नेपालमा अस्थिरता सृजना गराउँदै नेपाललाई लुटिरहेको छ ।
त्यसैले नै प्रधानमन्त्री केपी ओली अदालतको पैmसला आफ्नो पक्षमा आउने कुरामा ढुक्क देखिएका छन् । संसद्प्रति जवाफदेही बन्ने गरेको ओलीको विगत छैन । संसदलाई र आफ्नै पार्टीको निर्णयलाई समेत अवज्ञा गर्दै ओलीले संविधान विपरित संसद विघटन गर्न पुगे र पार्टीलाई विभाजित समेत गराएका छन् । तर पनि अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने दावी ओलीले गरिरहेका छन् । हुन त संसद विघटन र पार्टी विभाजनबाट देश र जनतालाई कुनै नोक्सानी भइरहेको छैन । तैपनि जनताले कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा दुईतिहाई बहुमत दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका थिए, डबल नेकपाको नेतृत्वबीच उत्पन्न विवादले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय हितका सवालमा गैरजिम्मेवार बनिरह्यो भने जनजीविकाको सवालमा पनि सरकारको कार्यशैली सामन्तवादी राज्यसत्ताले गर्ने काम भन्दा फरक देखिएन । त्यसैले सत्तासीन हुन पुगेको दुईतिहाई बहुमत प्राप्त डबल नेकपाप्रति जनमानसमा वितृष्णा बढाएको थियो । यस्तो अवस्थामा यो पार्टी विभाजित हुनु र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुले संसदीय पद्दतिकै असफलताको सन्देश दिएको छ । यसबाट कम्युनिष्ट समर्थक नेपाली जनतालाई खासै फरक पर्ने कुरा भएन नै !
प्रसंग परराष्ट्रमन्त्रीको आशन्न भारत भ्रमणमै जाउँ, अहिलेको देशको तरल राजनीतिक अवस्थामा अवैधानिक सरकारका मन्त्रीहरुको भारत भ्रमणको औचित्य के छ ? यस्तो अवस्थामा नेपालका मन्त्रीहरुलाई भारतले किन सम्मान गर्दैछ ? अस्तित्व रक्षाको संकटमा पुगेको सरकारका मन्त्रीबाट गरिने भारत भ्रमणबाट नेपालले केही प्राप्त गर्ला कि भनेर आशा गर्ने अवस्था छैन । भारतले नेपालबाट पाउनु पर्ने बाहेक दिनुपर्ने केही ठान्दैन । भारतलाई गण्डकी र कोशी नदी पहिलेका शासकहरुले दिएका थिए । त्यस वापतमा नेपालले के पायो ? त्यसपछि भारतलाई केपी ओलीकै विशेष पहलमा महाकाली नदी भारतलाई हस्तान्तरण गरियो, त्यसवापतमा नेपालले के पायो ? ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विजूली उत्पादन गर्न सकिने भनेर विश्व बैंकले प्रतिवेदन समेत पेश गरेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना ९ सय मेगावाट विद्युत शक्ति मात्र उत्पादन गरी भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइयो । त्यसबाट नेपालले के पायो ? त्यसैगरी देशव्यापी रुपमा विरोध हुँदा हुँदै अरुण तेस्रो परियोजना पनि ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी भारतलाई नै जिम्मा लगाइयो, नेपालले के पायो ? भारतले नेपालबाट पाउनु पर्ने अव के छ ? तर हेक्का राखौं गुमाउनु पर्ने धेरै छ । नेपाली जनता विरोधी नेपालका शासकहरु नदी बेचेर पानी खरिद गर्ने मूर्ख स्वाभावका छन्, यी शासकहरुले धेरै गुमाउन सक्छन् ।
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतबाट लगाइएको नाकाबन्दीको विरुद्धमा आपूmलाई प्रस्तुत गरेपछि उनको देशभक्ति छवि बनेको थियो । ०५४ सालतिर ओलीकै कारणबाट भारतसित भएको महाकाली सन्धिमा ओली गम्भीर रुपले आलोचित थिए । त्यो महाकाली सन्धिमा भएको राष्ट्रघातलाई समेत नेपाली जनताले विर्सिएर ओलीलाई देशभक्त मान्न पुगे । परन्तु ओलीको त्यो देशभक्ति लामोसमय टिक्न सकेन । ओलीले भारतलाई अरुण तेस्रो बुझाउँदा र माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता नवीकरण गर्दा उनको चुलिएको देशभक्ति गल्र्याम्म ढल्न पुग्यो । अझ त्यसैमा थपियो राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री रहँदा भारतसँग गरिएको नेपालमा भारतले आपूm खुशी लगानी गर्न पाउने सम्झौताको नविकरण गरेर । यो सम्झौताले नेपालस्थित भारतीय दुतावासलाई नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न र परियोजना रोज्ने अधिकार । अर्थात नेपालको विकास निर्माणका काममा भारत सरकारले समानान्तर नेपाल सरकारको हैसियत त्यस सम्झौताबाट गरेको छ ।
केपी ओली अहिलेको अवस्थामा पूर्वराजाहरुको हैसियतको शक्तिमा पुगेका छन् । संसद भनेको सरकार र जनताबीचको पुल हो । संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार संसद जनताको प्रश्न, जनताको गुनासो, जनताको अपेक्षा र जनताको सपनाबारे छलफल गर्ने महत्वपूण थलो हो । पूर्वराजा महेन्द्र र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरे जस्तै ओलीले संसद विघटन गरेका छन् । राजाहरुले संविधानका धारा प्रयोग गरेर विघटन गरेका थिए भने ओलीले संविधानमै अधिकार नभएको धारा प्रयोग गरेका छन् । संसदमा उठेका विषयहरुलाई समेटेर सरकारले योजनाका रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने संसदीय परम्परा हो । तर प्रधानमन्त्री ओली संसद्प्रति उत्तरदायी भएर र संसद्को शक्तिलाई विश्वासमा लिएर सत्ताको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक गोरेटोमा हिँड्नुभन्दा ती सबै गोरेटोहरु भत्काउँदै निरंकुश शैलीमा साम्राज्यवादी शक्तिको घोडा बनेर हिँड्न खोजिरहेका छन् । ओलीको यस्तो कार्यशैली जवाफदेहिताविहीन शासनप्रतिको लिप्सा हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यो जवाफदेहिताबिहीन शासनशैलीले ओलीलाई विदेशी शक्तिको आशिर्वाद आवश्यक महशुस हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैको लागि ओलीले आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारत भ्रमणमा पठाउँदै छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । संसदवादी धारका राजनीतिक दलहरुले यो कुरा बुझ्न ढिलो गरिरहेका छन् वा आपूmहरु पनि भारतलाई रिझाउने काममा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ?! खोजीको विषय भएको छ, आगे संसदवादी धारका नेताजीहरुलाई चेतना भया ! dharananws.com
२८ पुष २०७७, मंगलवार १७:२८ मा प्रकाशित